Kenya oo markale dalbatay in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhaxeysa Soomaliya - Awdinle Online
Kenya oo markale dalbatay in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhaxeysa Soomaliya
Dowladda Kenya ayaa Maxkamadda caalamiga ah ICJ ka dalbatay in dib loo dhigo kiiska Badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya markii 4aad sida uu daabacay wargaysa Nation ee ka soo baxa Nairobi.
Dowladda Kenya ayaa qoratay codsi ay ku dooneyso in arrinka Kiiska dib loo dhigo markii 4aad oo ay iyada dalbaneyso taas oo markan ku soo aaadday iyada oo ay Maxkamadda gashay Isbeddel dhinaca hoggaanka ah.
Xukumadda Nairobi ayaa ku doodaysa in uu ka maqanyahay Dhul dhinaca Berriga ah islamarkaana ay marka hore dooneyso in dhulkaas la xalliyo halka uu ku maqanyahay,sidaas darteedna dib loogu dhigo dhegeysiga dacwadda Soomaaliya kala dhaxeysa.
Khariirad ay soo bandhigtay Kenya ayey ku sheegtay in dhinaca Berriga uu dhul kaga maqanyahay gudaha Soomaaliya islamarkaana ay marka hore arrintaas xalliyaan iyada iyo Soomaaliya.
Dhegeysiga Maxkamadda ICJ ee kiiska labada dal ayaa loo ballansanyahay 15ka Bisha March 2021 iyada oo hoggaankii Maxkamadda ee Soomaaliga ahaa lagu beddelay Haweeney Mareykan ah hayeshee C/Qawi Axmed Yuusuf waxaa uu wali ka tirsanyahay 9ka Garsoore ee Maxkamadda.
Dowladda Soomaaliya oo horay loogu eedeeyay in ay gaabisay dadaalkii loo baahnaa si hoos loogu dhigo dalabka Kenya ee ah sheegashada Bada Soomaaliya, ayaan wali ka hadlin waxaana la ogayn go’aanka ay maxkamada Caalamiga ah ee ICJ ka qaada doonta dalabka Kenya.
Previous articleDilal ka dhacay Magaalada Kismaayo & Maamulka Jubbaland oo ka hadlay
Next articleCiidamada Puntland oo howlgal culus fuliyay